Hemp Archives • Bogga 4 ee 6 • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn xagasha
Saamiyada & Dhaqaalaha, cannabis, CBD, Wararka
(CNN Ganacsiga) Dadaalladii ugu dambeeyay ee Canopy Growth si loo yareeyo ganacsigeeda xashiishadda adduunka waxaa ka mid ah xiritaanka ...
Sidee CBD looga soo saaraa hemp?
CBD, ka dhiman
CBD waa maaddada fayoqabka cusub ee caanka ah. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu gacanta ku dhigo, laakiin xaggee dhab ahaantii ka yimaadaa? CBD waxay u taagan tahay ...
Saliida CBD vs CBD tincture: waa maxay farqiga?
Marka laga hadlayo xashiishka, THC iyo CBD waa labada walxo ee ugu hadal haynta badan. Saliida CBD waxay heshay caan caan ku ah daawooyinka kala duwan ...
Tune: cabitaanka cusub ee Ingiriisiga CBD
CBD, Wararka, Nafaqeyn
Hannah Glasson, oo ka mid ah aasaasayaashii sheekada caanka ah ee PR ee soo saarta cuntada iyo cabitaanka, ayaa soo bandhigtay cabitaanno kala duwan oo CBD ah.
Waxay u egtahay in intaad wax u iibsanaysid CBD, aad la kulantay ereyada "spectrum full" iyo "go'doon". Labadan sumadood ...
Waa maxay xanjada CBD? Ma jiraan faa'iidooyin caafimaad?
CBD Gummies waa nacnac la cuni karo oo ay ku jiraan saliid cannabidiol (CBD). Waxay ku yimaaddaan qaanso roobaadka dhadhanka, midabada, qaababka iyo uruurinta ...
Saliidaha saliida CBD miyuu yahay? Ama kaliya ka soo horjeedda?
Faa'iidooyinka la sheegayo ee CBD ayaa si ballaaran loo qaybiyey, waxaana jira hay'ad cilmi-baaris ah oo sii kordheysa oo lagu taageerayo ...
22 Oktoobar 2019
cannabis, CBD, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Cannabidiol (CBD) iyo cannabidiolic acid (CBDA) labadaba waa la yaqaan oo la heli karaa iskudhafyada kiimikada ee ka soo jeeda xashiishadda iyo geedka hemp. CBD,…
cannabis, CBD, Wararka, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Si loo yareeyo sharciga xashiishadda caafimaadka ee Thailand, cannabidiol (CBD) laga soo saaray xashiishadda lama sii kala saarayo ...
Sharciyeynta marijuana waxay albaabka u furtay warshad cusub oo macaash badan laga heli karo. Shirkado badan ayaa soo baxa oo macaasha ...
cannabis, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Bangkok, Thailand - Si kor loogu qaado horumarinta alaabada marijuana ee caafimaadka, waddamada xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee Thailand waxay soo bandhigeen xashiishad tayadiisu liidato iyo hemp ka soo saar ...
Ka ganacsiga daroogada ee Singapore macnaheedu waa ciqaabta dilka, laakiin taasi kama hor istaagin soosaarayaasha warshadaha iyo shirkadda tiknoolajiyadda ee CannAcubed inay halkaas gaarto ...
CBD markaas iyo hadda: ka waran sharciyeynta CBD iyo safarka?